Kwete kukwezva kwevashanyi: The Jordan Codices
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Jorodhani Kuputsa Nhau » Kwete kukwezva kwevashanyi: The Jordan Codices
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • tsika nemagariro • Jorodhani Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Trending Now
Dai 27, 2017
Jordan Codices inogona kuve nyowani inopisa inokwezva yekushanya muJorodhani. Hurumende muAmman haibvumirane uye inoiti ndeyekunyepedzera.
MaJorodhani Makodhi idangwe rekare mahwendefa makumi manomwe emitobvu ayo anogona kuchinja maonero epasirose enhoroondo yeBhaibheri. Nyanzvi yezvechitendero uye muongorori wezvekuIjipita, David Elkington, anga akatarisana nekuratidza huchokwadi hwezvinhu izvi zvinogona kuratidza mufananidzo wekutanga waKristu.
Ndichangodzoka kubva kuJorodhani, kwaakachengetwa kwemwedzi nevakuru veJordanian. Jorodhani zviremera zvinofunga kuti Elkington inyengeri. Elkington anofunga kuti hurumende yeJoridhani inoda kutsikirira ruzivo rwese rweanogona kunge ari mutambo mukuru wekushandura dzidziso yebhaibheri.
Zviremera zveJorodhani zvakatsanangura zvakawanikwa naDavid Elkington sezvisina musoro, zvichisimbisa kuti bako harina kuwanikwa uye mifananidzo yaasina kana chekuita nebako rakashanyirwa, izvo zvinoratidza kuti kusimbirira kwake pamusoro pemakodhi emakodhi hakuna hwaro uye hakutendeseke . Jamhawi, director weJordani antiquities department akati tekinoroji yazvino inogona kushandiswa kugadzira nyonganiso nekuti inogona kushandisa zvigadzirwa zvekare uye kudhirowa pairi kugadzira zvingangove zvisingazivikanwe zvekare zvekare.
MaElkingtons achiri kungo chengetedza kuti macodices anovimbika uye ane makore 2000 ekuberekwa
Yakachengetwa seimwe yezvinhu zvakakosha zvakawanikwa munhoroondo yezvokuchera matongo, asi ichikwikwidzwa se "zvemazuva ano zvekunyepedzera", makodhekisi akawanikwa muJordani makore angangoita gumi apfuura akaratidzirwa kuva echokwadi nenyanzvi dzeBritain.
Kana kufambidzana kwacho kwakasimbiswa, mabhuku acho aizove ari pakati pezvinyorwa zvekutanga zvechiKristu, pamberi pezvakanyorwa naSt Paul.
Tarisiro yekuti vanogona kunge vaine nhoroondo dzekare dzemakore ekupedzisira ehupenyu hwaJesu yakafadza vadzidzi - kunyangwe kushinga kwavo kuchidzikisirwa nenyaya yekuti nyanzvi dzakambonyengerwa nehunyanzvi hwenhema.
David Elkingto anoti mabhuku aya anogona kunge ari iwo 'makuru ekuwanikwa enhoroondo yechiKristu'.
'Ipfungwa inofadza kuti takabata zvinhu izvi zvingangodaro zvakachengetwa nevasande vekutanga veChechi,' akadaro.
Asi zvakavanzika zviri pakati pemapeji avo ekare hazvisi chirahwe chemabhuku chete. Nhasi, kwavari uye zvakare chimwe chinhu chakavanzika. Mushure mekuwanikwa kwavo neJordanian Bedouin, hoard iyi yakazowanikwa neIsrael Bedouin, uyo anonzi akavapinza zvisiri pamutemo muganhu kuenda kuIsrael, kwavanogara.
Nekudaro, Hurumende yeJordanian ikozvino iri kushanda pamatanho epamusoro kudzosa uye kuchengetedza kuunganidzwa. Philip Davies, purofesa wevadzidzi vebhaibheri muSheffield University, akati pane humbowo hwakasimba hwekuti mabhuku ane mavambo echiKristu mumahwendefa akakandwa mumepu yemifananidzo yeguta dzvene reJerusarema.
Mune chirevo chakatumirwa email kuThe Jordan Times, iyo Ion Beam Center (IBC), yakavakirwa kuYunivhesiti yeSurrey, UK, uye ichitsigirwa neEngineering nePhysical Sciences Research Council, munaNovember 30 yakaburitsa humbowo hutsva hwechokwadi hwe Lead Makodhi.
Iine mabhuku anosvika makumi manomwe akasungirirwa akagadzirwa nemutobvu, makodhekisi akawanikwa mumupata uri kure kuchamhembe kweJorodhani pakati pa70-2005, nehumwe humbowo hunoratidza kuti ndewemuzana remakore rekutanga kana rechipiri AD. Nyanzvi dzinoongorora mitauro dzakataura kuti ndiwo chete magwaro echiHebheru neechiKristu, vachipokana nekukosha kweMipumburu yeGungwa Rakafa yakawanikwa pakati-pezana ramakore mumapako eJordani Valley.
Codex, ichiumba chikamu cheMutungamiri Codices muunganidzwa, yaive pachikwereti chepamutemo kuIBC yekudzidza kubva kuDhipatimendi reAntiquities. Mutungamiri weBS, Prof. Roger Webb, uye Senior Liaison Fellow, Prof. Chris Jeynes, vataura kuti kodhekisi haina kuratidza radioactivity inouya kubva mudenga polonium iyo inowanzoitika mazuva ano lead sampu, zvichiratidza kuti kutungamira kwekodhekisi kwaive yakanyungudika pamusoro pezana ramakore rapfuura, uye hachisi chigadzirwa chekugadzira kwemazuva ano.
Mumwezve mushumo wemuongorori akazvimirira Matthew Hood, muongorori wekukanganiswa kwemakodhekisi kubvira 2009, akataura kuti "kuumbwa kunooneka kwemakristal emaminerari simbi painodzokera kumakemikari anopa humbowo hwakasimba hwezera rakakura rezvimwe zvigadzirwa" .
“Kufungidzira kwekunyepedzera, kwakaratidzwa nevabloggi uye katsamba kakakurumidza kuburitswa muTimes Literary Supplement muna2011, zvakarambidzwa neongororo dzakazvimirira dzesainzi yesimbi iyi pamwe nekuongorora kwenyanzvi kusati kwaburitswa. Hapana kana mumwe weavo vane chekuita nekutsvagisa macodices ane kusahadzika nezvekare, "chirevo chakadaro.
Muna Mach 2017 Dhipatimendi reJoridhani rezvinhu zvekare (DoA) nemusi weChina rakazivisa kuti makodhi anotungamira awakatora achibatsirwa nevane masimba ekuchengetedza makore anosvika manomwe apfuura haana kuratidzirwa kuva echokwadi kusvika zvino, Jordan News Agency, Petra, akadaro.
DoA Director General Monther Jamhawi akataura kuti timu yenyika yevaongorori uye nyanzvi dzakaongorora nzvimbo yebako raifungidzirwa kuti macodices akawanikwa asi haana kuwana hukama pakati pemakodhi nebako, kunyanya sezvo pasina maburi mumadziro ebako akawanikwa. .
Dhipatimendi rakatsanangura zvakawanikwa nasayendisiti weBritish David Elkington sezvisina musoro, richisimbisa kuti bako racho harina kuwanikwa uye mifananidzo yaasina kana chekuita nebako rakashanyirwa, izvo zvinoratidza kuti kusimbirira kwake pamusoro pemakodhi emakodhi hakuna hwaro uye kwete kuvimbika.
Jamhawi akataura kuti tekinoroji yazvino inogona kushandiswa kugadzira nyonganiso nekuti inogona kushandisa zvigadzirwa zvekare uye kudhirowa pairi kugadzira zvingangove zvisingazivikanwe zvekare zvekare.
Nekudaro, iyo DoA yakati hurukuro dzese muElkington hurukuro dzichangoburwa pamusoro penyaya iyi hadzisi dzechokwadi kana chinangwa, Jamhawi akadaro, achiona kuti kushanya kwemusayendisiti kuJordani nekugadzirisa nyaya iyi pasina mvumo "kutyora kuri pachena" kwemitemo.
Mukuru weDoA akadaidzira kutora ruzivo kubva kuvakuru, achiona kuti DoA yaizozivisa veruzhinji nezve data rakasimba nezvenhaka yavo yenyika chero bedzi vachinge varatidzwa kuti nderechokwadi.
“Jordan Codices ndiwo magwaro ekutanga echiKristu akambowanikwa, anotangira panguva apo Jesu Kristu aive achiri mupenyu muna 30AD; nepo Mipumburu yeGungwa Rakafa yakadzokera ku75AD, ”maererano nevhidhiyo rakaburitswa papeji re" Facebook Yenhaka yeJorodhani "uye rakagovaniswa nepeji repamutemo reElkington" Jordan Codices ".
Vachitaura muvhidhiyo iyi, yakaburitswa munaKurume 3 gore rino, David naJennifer Elkington vanoti Jordan Heritage, kambani isingabatsiri mari, yakavakoka kuJordani kuti vataure nezvemakodhi.
Vanoti makodhekisi anoratidza kuti Jesu nevaKristu vekutanga vaigara muJorodhani, vachiwedzera kuti "kubvira 2008", bvunzo dzakateerana dzakaitwa kumarabhu gumi nemashanu akazvimirira pasi rese, ane mhedzisiro yese yakaratidza kuti macodices anosvika panguva iyo Kristu aive mupenyu. .
"Kuyedzwa kwakaitwa paUniversity yeSurrey's Ion Beam Center gore rapfuura kwakaratidza kusavapo zvachose kweiyo radioactivity," vhidhiyo yakadaro, zvichiratidza kuti zera remakodhi nderechokwadi uye rinodzokera kumakore zviuru zviviri.